Wararka - Yuancheng ka xoog badan: Mar kale soo noqo
Bishii Oktoobar 15, Carwadii 126-aad ee Canton waxay ku bilaabatay sidii loogu talagalay. Yuancheng Auto Accessories Manufacturer CO., LTD waxay umuuqatay muuqaal cusub oo wata shaxan cusub.
Midab casri ah oo beddelaya hooska qorraxda iyo istiraatiijiyadda daboolka isteerinka, kuwa ugu fiican ee iibiya taxanaha hadhka qorraxda, taxanaha gawaarida cusub, taxanaha teendhada moodada, iwm ayaa dhammaantood ka muuqday bandhiga si la yaab leh carwada u soo bandhigay.
Gelitaanka qolka Yuancheng, waxaad arki doontaa aagga wax soo saarka banaanka halkaasoo qaboojiyeyaasha gawaarida casriga ahi dhigteen. Albaabka laga soo galo waxaa ku yaal moodel teendho oo otomaatig ah oo soo jiidata dadka soo booqda. Waxa ku xiga aagga wax soo saarka dibadda waa aagga alaabada gudaha ee baabuurta. Dhowr iibiyeyaashu waxay muujinayaan macaamiisha howlaha alaabada.
Marxaladda 1, martida ayaa si aad ah u qiimeeyay waxqabadka sarreeya iyo kalsoonida qaboojiyaha gaariga Yuancheng. Wax soo saarka gudaha sida gaashaanka qorraxda iyo isteerinka isteerinka waxaa laga sameeyaa dhar dixeed oo soo bandhigaya saameyn dhalaalaysa oo midab leh oo saameyn ku leh iftiinka ama heerkulka. Tani waa badeecad dhaqameed caadi ah, si kastaba ha noqotee Yuancheng waxay ka dhigtaa inay ku dhalaasho naqshad gaar ah.
Wejiga 3aad, Yuancheng wuxuu soo bandhigay teendhada saqafka oo la casriyeeyay iyadoo la adeegsanayo dhar cusub oo neefsan kara, iftiin iyo UV u adkaysta, kaas oo miisaankiisu ka fudud yahay waxqabadkiisana ku fiican yahay. Intaa waxaa dheer, Yuancheng waxay si dhakhso leh u fahamtay jawaab celinta suuq-geynta iyo hagaajinta khibrada guud ee macaamiisha iyadoo lagu hagaajinayo daaqada teendhada.
Iyada oo alaabooyinka cusub la bilaabay, Yuancheng wuxuu caan ku noqday Canton Fair. Waabsiga Yuancheng had iyo jeer wuu badnaa oo alaabada si heer sare ah ayaa loo aqoonsaday, soo jiidashada macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay u yimaadaan wadahadal iyo isgaarsiin.
"Mustaqbalka, waxaan sii wadaynaa inaan sii wadno dadaalkeena oo aan sii wadno maalgashiga R&D, oo aan ku dadaalno sidii aan u noqon lahayn sumad caalami ah oo baabuur dalxiis iyo dalxiis bannaanka ah iyo waxyaabaha xilliyada firaaqada ah,", sida uu sheegay Xu Mengfei, madaxweynaha Yuancheng.
12v Qaboojiyaha Baabuurta Qaboojiyaha, Qaboojiyaha Qamriga Gawaarida, Mako Gaari qaboojiye, Taambuugga Gawaarida Caan ah, Ku Dabool Baabuurka Hoostiisa, Gaari qaboojiyaha la qaadan karo 12v,